Rats dị ka anụ ụlọ - ọ dịkwa mma maka ụmụ akwụkwọ?
Debe oke oke dika anu ulo dika o kwesiri
Rats bụ ezigbo anụ ụlọ maka ụmụ akwụkwọ. Ọ bụghị nanị na ha na-adọrọ adọrọ na-ekiri, ụmụaka na-amakwa ịme ka obere ụmụ anụmanụ na-emekọrịta ihe kwa ụbọchị na mkpanaka obere. Tụkwasị na nke ahụ, oke dị ka anụ ụlọ chọrọ nlebara anya kwa ụbọchị, na karịa ihe niile, ọtụtụ.
Ụmụaka na oke dika anu ulo
Rats bụ anụ ọhịa na-emegharị anya na a ghaghị edozi ya nke ọma. Ọ bụrụ na ọ na-adị ha ka ọ na-emetụ ha n'ahụ, ha nwere ike taa.
Mgbe ha kwadoro, ha na-adaba ngwa ngwa na njo na-ezighi ezi, dika. Igha na ọdụ nwere ike ibute mmerụ dị njọ. Maka umuaka, umu oke adighi adighi nma, dika umuaka ndi nwere nsogbu.
N'ụlọ akwụkwọ elementrị, ụmụ nwere ikike iji akọ na-ejide akọ. N'ime oge ahụ, mmasị ụmụ anụmanụ ndị na-adịghị ahụkebe na-amụba n'etiti ụmụaka. Rabbits na ezi pigs anaghịzi adị n'etiti mmasị.
Rats na-abụkarị ndị na-arụsi ọrụ ike, ma na-emekarị ka onye na-elekọta ha nwee ike ịdị na-arụ ọrụ n'ehihie.
Nghọta ha na-eme ka ha nwee mmasị karịsịa maka ụmụaka. Onye ọ bụla na-eme anụ ahụ mgbe nile, ha na-agba ọsọ ngwa ngwa. Ha hụrụ ụdị dịgasị iche iche, n'ihi ya, ndị nwe ha nwere ike ịhapụ ụgbọ mmiri mgbe ha na-edebe ogige ahụ. Enwere ike iji egwu tunnels, igbe nwere oghere na snippets akwụkwọ na ihe ndị ọzọ. Site n'enyemaka nke ọzụzụ ịpịpị, ị nwere ike ọbụna ịkụziri ha aghụghọ.
Ụzọ ziri ezi isi na-elekọta oke
Karịsịa ná mmalite, ọ dị mkpa isoro ụmụ anụmanụ na-elekọta ụmụ anụmanụ. Ị ga-amụta ịbịaru nso ụlọ ahụ ka ọ na-agwa ụmụ anụmanụ okwu n'atụghị egwu.
Maka ịmalite ịkọ oke oke, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ikpebi ịzụta maka anụmanụ ndị dị ugbu a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ụmụ anụmanụ na-eto eto, ị ga-eso ha na-emeso ha ihe kwa ụbọchị, nke mere na ha dị nnọọ mma. Ndị mmadụ na-ejikarị nwayọọ nwayọọ eme ihe mgbe ụmụ nwanyị na-eme ihe.
Ọzọkwa, a ghaghị imegharị ya. Naanị mgbe nwatakịrị ahụ dị jụụ n'iso ụmụ anụmanụ na-emeso ya na ọ naghị ejigide ọkpụkpụ ọ bụla nke ụbụrụ na-akụda, ọ bụ oge iji wepụ oke dị n'èzí n'enweghị nlekọta.
Ọ naghị eme ka ụmụ oke na-enwe obi ụtọ na a ga-ebuga ha n'ubu ha n'okporo ámá. O yiri ka ọ na-adịkarị mma maka ụmụaka toro eto. Ma ọ bụ nrụgide maka ụmụ anụmanụ.
Rats nwere omume mmekọrịta pụrụ iche. Ha na-enwe nnọọ obi ụtọ dị ka anụ anụmanụ, ma ọ bụrụ na a na-edebe ya na ọkara na atọ. Ubi nke otu n'otu bu anu ohia. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ naanị ụra na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nanị ha ka ọ bụ otu echiche efu.
Ezị dị ka anụ ụlọ
Ndị nwere ọgụgụ isi chọrọ otutu ohere. Nke kachasị mma bụ nnukwu onu na ihe nkedo dị ka nnukwu nnụnụ. Nke a nwere ike ịhazi ya dịka ọ chọrọ ka e wuru ụlọ na ịrị elu. Site na ndị nne na nna maara nke ọma, a pụkwara ịgbanye uwe mgbochi ochie n'ime ụlọ oke nkịta.
Ihe oriri na-agwakọta, dị ka oke bụ omnivores. Isi nri bụ oke nri nri, ihe oriri nke mkpụrụ osisi na mkpụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, obere anu ulo chọrọ mkpụrụ na akwụkwọ nri ọhụrụ kwa ụbọchị. Dị ka ihe na-emeso n'etiti bụ cheese cheese, yogọt, ihe ndị na-acha ọcha, biscuits nkịta na ụmụ ahụhụ ụfọdụ, dị ka skep.
Akuru na-echekwa dika anu ulo enweghi ihe jikotara ya na "oke nkiti" ma obu oke aja. Ha sitere n 'ubo a na - eme ihe site na ulo oru nyocha umu anumanu, mana nke a aputaghi na ha adighi oria.
O di nwute na ha emeghi agadi. Afọ abụọ abụela agadi n'ihi obere òké. Ụmụaka na-amụta ihe a na-apụghị izere ezere na ha ga-emesị nwee obi ụtọ n'ahịa ha. N'aka nke ọzọ, onye anaghị ejikọta oke na oke ogologo, nke bụ uru maka ọtụtụ nne na nna maka nwamba na nkịta.
Short story for children - A pet as a ...